Mahiga: Shirka waa loo wada dhanyahay - BBC News Somali
Mahiga: Shirka waa loo wada dhanyahay
25 Luulyo 2012
Image caption Qaramada Midoobey waxay leedahay Somalida oo dhan waa lagu mathalaya shirka ansixinta destuurka
Ergeyga gaarka ee Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobey Augustin Mahiga ayaa sheegey in shirka Arbacada furmey ee golaha ansixinta destuurka ay ka qeyb-galayaan dhamaan dhinacyada Somalia.
Mahiga waxaa uu beeniyey in Qaramada Midoobey ay isku dayeysa in madaxda qaar ay ka hor-istaagto inay u tartamaan jagada madaxtinimo.
Mahiga ayaa ugu horreyn la weydiiyey in uu faa-faahin ka bixiyo shirka maanta furmey ee lagu ansixinaayo destuurka.
Mahiga: Shirkani waxaa uu kamid yahay tallaabooyinka ugu dambeeya ee lagu soo afjarayo xilliga kumeel gaarka ee Somalia. Waa talaabo ay ku shiarayaan dad mathalayo shcabka Soomaaliyeed oo ka gala yimid gobollada kala duwan ee dalka. Howsha ay qaban doonaan guddigani sagaalka beri ee soo socda aya ah inay ansixiyaan destuurka Somalia.
BBC: Waxaa soo harey mudo hal bil oo kaliye si loo soo doorto xildhibaano, guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne, iyo welibo in la ansixiyo destuurka. Mudadaasi ma ku filantahay howshaasi tirada badan?
Mahiga: Lixdii bilood ee ugu dambeysey waxaan kordhiney dadaalka aan ugu jirno in aan soo afjarno howshan destuurka. Guddigan sagaal maalmood gudaheed ayaa lagu doonayaa in uu ugu codeeyo destuurka cusub. Waxaana la filayaa in 2-da August lagu dhawaaqi doono baarlamaanka cusub. Mudanayaasha baarlamaankana waxaa soo xuli doono oday dhaqameedyada joogey halkan Muqdisho laba bilood iyo barkii ugu dambeeyey.
Image caption Mahiga waxaa uu beeniyey in uu dhinac la marey qaar kamid ah madaxda Somalia
BBC: Ma jiraan wararka sheegaya in khilaaf uu ka dhaxeeya madaxda Somalia oo Qaramada Midoobey-na ay la dhinac martey qaar kamid ah madaxdaasi, oo welibo isaga shakhsi ahaan uu ku dadaalayo in madaxda qaarkeed laga hor-istaago tartanka madaxtinimo?
Mahiga: Howsheena waxay tahay in aan Somalida caawino, oo aan hubsano inaan meesha jirta fursad u suura-gelineysa in dhamaan dadka ay ku tartamaan iyadoo aanay jirin wax caqabad ah. Waxaa dhab ah in qaar kamid ah madaxda haatan joogo ay doonayaan inay u tartamaan jagada madaxtinimo, lakin Qaramada Midoobey ahaan waxaan dooneynaa in dadka ku cusb tartanka ay iyaguna helaan fursad ay ugu tartami karaanm. Ma jirto sabab ay Qaramada Midoobey u adeegsato is badelkani si aan dadka qaar u horistaagno. Waxaan dooneynaa oo kaliye doorashooyin xur ah oo si cadaalad ah u dhaca.
BBC: Somali badan ayaa aaminsan in howshani ay tahay mid ay daba ka riixeysa Qaramada Midoobey oo aanay Somalida dowr ku lahayn, taasi oo sabab u ah dib-u-dhacyada ku yimid shirkani. Taasi maxaad ka leedahay?
Mahiga: Shirarka Road Map-ka dhamaantodd waxay ka dhaceen gudaha dalka, tan kale waxay tahay Somalida markii ugu horreysey ayay ka qeyb-qaateen qorshaha lagu so afjarayo kumeel gaarka. Iyaga ayaa sameystey Road Map-ka, ceebta dadaaladii hore waxay ahayd in Somalida ay ka maqnaayeen meesha. Dadaaladani waxay ka qeyb-qatey dhamaan dhinacyada Somaaliyeed ee ay arrinta khuseysa. Shirkan bilaabanayana dhmanaan dhinacyada Soomaliyeed waa lagu mathalaya.